Progressive Voice Myanmar » အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ – မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပေးပို့သောအကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များ
Home Resources Statements အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များသိ...
Statement 933 Views
April 23rd, 2021 • Author: 744 individuals , 402 civil society organisations in Myanmar and 444 in other Southeast Asian nations and globally • 10 minute read
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၁ ရက်
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ
လေးစားရပါသောဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်များ ခင်ဗျား/ရှင့်
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်အညီ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်နေသည့် တရားမဝင် ရက်စက်သော အာဏာသိမ်းမှုနှင့် စစ်အုပ်စုက ကျူးလွန်သော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် ရာဇဝတ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် ကုသသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၊ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံး (ICC) နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အတူ ထိရောက်ခိုင်မာသော မဟာဗျူဟာတစ်ခုကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန် အောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၇၄၄ ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း ၄၀၂ ဖွဲ့နှင့် အခြား အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း ၄၄၄ ဖွဲ့တို့က တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို (Joko Widodo) ၏ အဆိုပြုချက်အပေါ် အခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများအပေါ် စစ်အုပ်စုမှ လုပ်ဆောင်သော အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲမှုများနှင့် အရပ်သားများအပေါ် ကြောက်မက်ဖွယ် တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း ပိုမိုဆိုးရွားလာနေသော အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးရန်အတွက် အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မိမိတို့မှ ထောက်ခံကြိုဆိုသည်။ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များမှ ၎င်းတို့၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သည့်အဖွဲ့ကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆိုးရွားလှသည့် အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကတိကဝတ်ပြုမှုကို ထင်ဟပ်သည့်အပြင် လိုက်နာရမည့်ထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ မတူကွဲပြားနေသော ရပ်တည်ချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြပ်အတည်းကို ပြည်တွင်းရေးသာဖြစ်ပြီး “အာဆီယံနည်း” အရ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မပြုခြင်းနှင့် နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာအပေါ် အလွန်အကျွံ လေးစားမှုတို့ကြောင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်၀သော အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဥ်သွားမည်ကို မိမိတို့မှ စိုးရိမ်မိပါသည်။
စစ်အုပ်စုမှ မြန်မာပြည်သူများအပေါ် တမင်ရည်ရွယ်သော သတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား မတူကွဲပြားသော ရပ်တည်ချက်များက အာဆီယံအတွက် ဘုံသဘောတူညီချက် ရရှိရန် အခက်အခဲဖြစ်စေပြီး မရေရာမှုများကို ထွက်ပေါ်စေခြင်းနှင့် အာဆီယံ၏ တုံ့ပြန်မှုများ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေမှုသည် မိမိတို့အား ဝမ်းနည်း အမြတ်ဒေါသ ဖြစ်စေပါသည်။ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အလွတ်သဘော အစည်းအဝေး (IAFMM) မှ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်များက ဖော်ပြနေသည်မှာ အာဆီယံ၏ တုံ့ပြန်မှုသည် မြန်မာပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိပေ။ IAFMM အစည်းအဝေး ဥက္ကဌ၏ ကြေညာချက်သည် စစ်အုပ်စု၏ ရက်စက်ယုတ်မာမှုများကို တိကျစွာ လူသိရှင်ကြား ဝေဖန်ရှုတ်ချခြင်း မရှိသကဲ့သို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီများနှင့် ပိုမိုအားကောင်းသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် တောင်းဆို ခဲ့ခြင်းလည်း မရှိပေ။ ထို့အပြင် အာဆီယံသည် စစ်အုပ်စု ခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ပစ်မှတ်ထား စီးပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လက်နက်ခဲယမ်း ပိတ်ဆို့မှု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး (ICC) သို့ လွှဲပြောင်းရေး တောင်းဆိုချက်များအပေါ် ထောက်ခံရေး ၎င်း၏ ကတိကဝတ်ကို ဖော်ပြရန်လည်း ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ မတူညီသော အကျိုးစီးပွားနှင့် နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒများ ရှိနေခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို ဖြေရှင်းရန် အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှ လျင်မြန်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော ကြားဝင်ဖြေရှင်းမှုကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ဖော်ဆောင်နိုင်မည် ဆိုသည့်အပေါ် မိမိတို့မှ စိုးရိမ်ပူပန်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဒီမိုကရေစီ ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အာဆီယံ၏ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော စုပေါင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို လိုအပ်သည်။ လာမည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များမှ စစ်အုပ်စုအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ဆက်ဆံရန် ဆုံးဖြတ်ပါက စစ်အုပ်စု၏ ရာဇဝတ်မှုများကို တရားဝင်စေမည်ဖြစ်သဖြင့် အာဆီယံနှင့် မြန်မာပြည်သူတို့၏ ဆက်ဆံရေးကိုသာမက ဒေသတွင်းတစ်ခုလုံး၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု ကိုလည်း ပျက်စီးစေလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် အာဆီယံနှင့် ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၆%၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ လူထုအာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုနှင့် အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီများဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာပြည်သူများ ထောက်ခံ ထားသည့် တရားဝင် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရဖြစ်သည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ တရားဝင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုရမည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရကသာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုးရွားလှသည့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေသည့် တရားမဝင် စစ်အုပ်စုက မဖြစ်ရပေ။
ဤစာကို အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထံ ပေးပို့သည့်အချိန်တွင်ပင် ဆန္ဒပြသူများအပေါ် လုပ်ဆောင်နေသော စစ်အုပ်စု၏ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် သတ်ဖြတ်မှုများသည် လျော့နည်းလာမည့်လက္ခဏာ မရှိဘဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ လက်ရှိအချိန်ထိတွင် စစ်အုပ်စုမှ လူဦးရေ ၃,၂၂၉ ဦး မတရားဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားပြီး လူပေါင်း ၇၃၇ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကာ ထိုအထဲတွင် အမျိုးသမီး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးများ ပါဝင်သည်။ ကရင်နှင့် ကချင် တိုင်းရင်းသား နယ်မြေများတွင် စစ်အုပ်စုက ကျေးရွာများအား ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် အရပ်သားပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်။ ထိုဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် ကလေးငယ်များအပါအဝင် အရပ်သားများ အသက်ဆုံးရှုံးရမှုများအပြင် ၎င်းတို့၏ လုံခြုံမှုအတွက်သာမက ကျန်းမာရေး၊ နေထိုင်ရေးနှင့် အစားအသောက်တို့အတွက်ပါ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရသည်။ ထိုထွက်ပြေးရသူများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မွေးဖွားခါနီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်သည်။ ထိုအထဲတွင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်း မီးဖွားခဲ့ရသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဖြစ်ရပ်လည်း ရှိခဲ့သည်။ အခြေအနေ၏ ဆိုးရွားမှု၊ ကျူးလွန်ချိုးဖောက် ခံနေရသူ အရေအတွက် များပြားလာမှုနှင့် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတို့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ အကြပ်အတည်း၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် အာဆီယံအနေဖြင့် ခိုင်မာထိရောက်သော အရေးယူဆောင်ရွက် မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် မိမိတို့မှ တိုက်တွန်း တောင်းဆိုသည်။
အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များမှ မြန်မာပြည်သူများ၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် စိတ်ဆန္ဒကို နားထောင်ပြီး အလေးအနက်ထား ထည့်သွင်းစဥ်းစားလုပ်ဆောင်ရန် မိမိတို့မှ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုသည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် တရားမျှတမှု ကာကွယ်ရာတွင် ၎င်းတို့၏ အသက်များကို စတေးထားသော မြန်မာပြည်သူများ၏ အသံများသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ လုပ်ဆောင်မှုပုံစံနှင့် ရလဒ်များ၏ အခြေခံကျောရိုး ဖြစ်ရမည်။
ထို့ကြောင့် အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် အောက်ပါတို့ကို ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်ပေးရန် မိမိတို့မှ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် တရားမဝင် စစ်အုပ်စုမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်မှုကို ငြင်းပယ်ရန်၊
အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နေရာကို တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား ပေးအပ်ရန်၊
နိုင်ငံသားများနှင့် ဆန္ဒပြသူများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများအားလုံးရပ်တန့်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ၊ ဆန္ဒပြသူများ၊ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်များနှင့် သတင်းသမားများ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားများအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးရေး၊ နှင့် အင်တာနက်နှင့် အထွေထွေဆက်သွယ်ရေး ကန့်သတ်မှုများအားလုံး ရုပ်သိမ်းပေးရေးတို့ကို တောင်းဆိုရန်၊
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်၊ အကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်ရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေခံသော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပူးတွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ စေလွှတ်နိုင်ရေးဦးတည်သော အာဆီယံ၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီနှင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတို့အကြား ခိုင်မာသော ညှိနှိုင်းတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဥ် တစ်ခု ‌ရေးဆွဲရန်၊
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက်ခဲယမ်းပိတ်ဆို့မှုနှင့် စစ်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား ပစ်မှတ်ထား စီးပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတို့ ချမှတ်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေကို နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံး (ICC) သို့ လွှဲပြောင်းရန် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ အစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုများကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံရန်၊
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာ အကူအညီလမ်းကြောင်းများ ဖွင့်ပေးခြင်းအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ရောက်မှုဒဏ်ခံရသော နယ်မြေများအားလုံးသို့ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားရေးဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ရောက်ရှိနိုင်ရေး အာမခံချက်ပေးရန်၊
ရိုဟင်ဂျာများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူနှင့် ဒုက္ခသည်များ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ လုံခြုံရေးနှင့် နေထိုင်စားသောက်ရေးများကို ဦးစားပေးကိစ္စရပ်များထဲမှ တစ်ခု အဖြစ် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ရန်၊
အာဆီယံနိုင်ငံများအနေဖြင့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို ၎င်းတို့၏ တရားဝင်မှု အဆင့်အတန်း မည်သို့ရှိစေကာမူ နေရပ်ပြန်ပို့ခြင်း မပြုရ။ သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံနိုင်ငံများအနေဖြင့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းသဘောတူညီချက်များကို တစ်နှစ် သို့မဟုတ် အထက် သက်တမ်းတိုးပေးရန်၊
မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ယာယီဆိုင်းငံ့ခြင်းအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သိသာ ထင်ရှားသော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန်။ ထိုဆိုင်းငံ့ထားမှုကို အာဆီယံအနေဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုကို စစ်အုပ်စုမှ လက်ခံပြီးသည့်အချိန်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ စစ်အုပ်စုမှ အပြည့်အဝ ရာသက်ပန် ခြွင်းချက်မရှိ ဝင်ရောက်ပြီးချိန်၊ စစ်အာဏာရှင်အား ICC သို့ တင်ပြီးချိန်နှင့် ဒီမိုကရေစီကို ပြည့်ဝစွာ တည်ဆောက်ပြီးမှသာလျှင် ရုပ်သိမ်းသင့်သည်။
ဘုံသဘောတူညီမှုနှင့် ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ရေးဆိုသည့် “အာဆီယံ နည်း” ကို ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှ သာလျှင် အာဆီယံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအပေါ် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး ခိုင်မာသောနည်းလမ်းဖြင့် ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကျဆုံး‌တော့မည့် နိုင်ငံဖြစ်ရန် အလွန်နီးကပ် လာနေသည့်အတွက် အာဆီယံအနေဖြင့် ယခုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည့် အခြေအနေ ဖြေရှင်းရန် အရေးတကြီး လိုအပ်မှုအပေါ် ခိုင်မာသော ရပ်တည်မှုတစ်ခု ပြရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် နိုင်ငံများ၏ ခိုင်မာသော၊ မျှတသော လူသားဆန်သော အရည်အသွေးရှိသော အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အာဆီယံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပို၍ပင် ညိုးနွမ်းပျက်စီး စေသည်သာမက အာဆီယံ၏ အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ရေး မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရေး ကြိုးပမ်းချက်များကိုလည်း အားနည်းစေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ALTSEAN Burma (Alternative ASEAN Network on Burma),
SEAN SOGIE Caucus
တစ်သီးပုဂ္ဂလ – ၇၄၄ ဦး
မြန်မာ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း ၄၀၂ ဖွဲ့
အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း ၄၄၄ ဖွဲ့
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် – ea-asean@forum-asia.org
အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ လက်မှတ်ရေးထိုးသော အဖွဲ့အစည်းများ
Action & Solidarity in Korea
Activists Group on the Street
AKKMA NATIONAL COALITION PILIPINAS
Aksi Lilin Jakarta
All Indonesian Trade Union Confederation (KASBI)
Alliance for Conflict Transformation (ACT) Cambodia
Alternatives to Violence Project In Korea
ASEAN Parliamentarian for Human Rights (APHR)
Asia Pacific Forum for Women Law and Development (APWLD)
Asian Culture Forum on Development Foundation (ACFOD)
Asian Migrant Women Center
Ateneans for Governance, Innovation, Leadership and Service (AGILAS)
Australia Karen Organizations
Building and Wood Workers International Asia Pacific Region
BUTTL’ Chunganm Human Rights Educational Activist Group
Canadian Buddhist Civil Liberties and Human Rights Association
Coalition of Cambodia Farmers Community Association (CCFC)
Catholic Association Of Labour And Elderly (Masan Diocese)
Catholic Women’s Center
Changnyeong Environmental Movement Union
Changwon Icoup Consumer Life Cooperative
Changwon Sustainable Development Council
Changwon Women’s Association
Changwon Women’s Center Jinhae Hall
Cheongma History Meeting
Child Fund Korea Gyeongnam Children’s Protection Center
Christian Association for Community Organizing
Chung Soon-Wook Of Changwon City
Church and Society Committee of PROK
Citizens’ Coalition For Democratic Press Of Gyeongsangnam-Do Province
Citizens’ Coalition For Economic Justice In Geoje
Citizens’ Solidarity Tongyeong Branch
Civic Association Of Masan, Changwon And Jinhae With Grandmothers ‘Japanese Military Sexual Slavery’
Civic Association Of Tongyoung Geoje With Grandmothers ‘Japanese Military Sexual Slavery’
Coalition of Cambodian Farmers Community-CCFC
Coalition of Industrial Accidents Prevention in Ulsan
Cultural Incheon Network
D4B – Democracy for Burma
Dongyo Childish Grownups
Ecological Environmental Education And Cultural Center
Education Hope Gimhae Parent Association
Education Hope Gyeongnam Parent Association
Education Hope Sacheon Parent Association
Ekta Parishad Manipur
Enjoyable SW Thinking Lab
Eyes Of Citizens
Fellowship with the Sufferers
Fine Dust Resolution Gyeongnam Citizens’ Headquarters
FKTU Ulsan Regional Office
Foinsa’e Hahu Futuru Timor
Forest Of Life In Gyeongsangnam-Do
Freedom Dignity and Asia
Gathering Of Gyeongnam Teachers To Protect The Environment And Life
Geoje Civic Energy Cooperative
Geoje Sustainable Development Council
GEOJE Young Womens Christian Association
Gimhae Education Solidarity
Gimhae Sustainable Development Council Ecological Division
GJIF(Gwangju independent film)
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict – Southeast Asia (GPPAC – SEA)
Goesan Gender Equality Lecturer’s Group
GreenKorea Legal Center
Groups of Social and Political Commentators in Cambodia
Gwangju Alliance Against Opposing the Military Regime and Supporting Democratization in Myanmar
Gwangju Asia Sisterhood Network
Gwangju Cinema Solidarity
Gwangju Greenkorea United
Gwangmyeong Young Women’s Christion Association
Gyeongnam Amphibian Network
Gyeongnam Energy Transition Network
Gyeongnam Grass Root Environmental Education Center
Gyeongnam Green Party
Gyeongnam Migrant Center
Gyeongnam Solidarity For Safe School Meals
Gyeongnam Sunlight Development Cooperative
Gyeongsangnam-Do Branch Of The National School Non-Regular Workers’ Union
Gyeongsangnam-Do Civic Environment Research Institute
Gyeongsangnam-Do Information Society Research Institute
Gyeongsangnam-Do Women, Moms, Peoples’ Party
Gyeongsangnam-Do Women’s Human Rights Counseling Center Of Women’s Association
Haemalgeum(Sunny) Cultural Activity Center
Haman Women’s Association
HANBAIK CHURCH YOUNG ADULT
HAPPYCLASS MEDITATION COMMUNITY
Human Rights Center of the National Council of Churches in Korea(NCCK)
I Coop Consumer Life Cooperative In Jang Yu
Immigrants Advocacy Center Gamdong
Incheon Civil Society in Solidarity
Incheon People Solidarity
Incheon Solidarity Against Disability Discrimination
Institute For Deliberative Democracy And Environment
Institute for Green Transformation
International Development Community Alliance in Korea
Ivy Humanities School
Jakarta Candlelight Action
Jeonju Youth Counseling & Welfare Center
Jeonju’s Solidarity for Democracy in Myanmar
Jinhae Women’s Association
Jinju Environmental Movement Union
Jinju Regional Economic Research Institute
Jinju Women’s Association
Joint Committee on Freedom of Expression and Press Repression
June 10 Minju Gyeongnam
June 15 Joint Declaration Changwon Branch
June Democratic Resistance Spirit Succession Gyeongnam Association
Justice Party Gyeongnam Youth Student Committee
Justice Party Gyeongsangnam-Do Party
Justice Party Yangsan Regional Committee
Justice Party’s Namhae Hadong Regional Committee
KHMU (Korea Health and Medical labor Union)
Korea Eco Farmers Association
Korea Federation for Environmental Movements in Incheon
Korea Federation Of Environmental Movements In Gimhae And Yangsan
Korea Federation Of Environmental Movements In Machangjin
Korea Federation Of Environmental Movements In Sacheon
Korea Federation Of Producers In Gyeongsangnamdo Province
Korea Institute for Religious Freedom
Korea Institute Of Ecological Environment
Korea Rurban Regeneration Citizen’s Solidarity
Korea Teachers Union-Ulsan
Korean Civil Society in Solidarity with Rohingya
Korean Confederation Of Trade Unions Women’s Committee
Korean Pharmacists for Democratic Society(Ulsan district)
Korean Producers & Directors’ Association
KSPI – CITU (Confederation of Indonesia Trade Union)
KTU Yangsan Middle School Branch
Kyungnam University Alumni Community
Kyungnam University Environmental Group
Labour Party Gyeongsangnam-Do Provincial Party
Lawyers foraDemocratic Society, Ulsanjibu
List of Signatory (Southeast Asia and Global)
Mandooparty to prepareanew church
MARCO(Migration Action Research Community)
Masan Icoup Consumer Life Cooperative
Migrant World Film Festival
Militants for Workers’ Liberty(Ulsan)
My Neighborhood Small Library
Myanmar Alliance in Malaysia (MAM)
Myanmar Club, Singapore
Myanmar Democracy Network in Korea
Myanmar Human Rights Alliance Network (MHRAN)
Naeseo Village School
Namhae Women’s Association
Namyangju Women’s Center for Migrant Workers
National Farmers Association Busan Gyeongnam Federation
National Trade Union Center Philippines
National Women Farmers Association Gyeongsangnam-Do Union
Negrosanon Young Leaders Institute Inc.
NEVER AGAIN’ Association
Non San Young Women’s Christian Assosiation
OFM KOREA JPIC
Organisation Of Karenni Development (OKD)
Osan Welfare Community Center
ParkJongCheol Memorial Foundation
People In My Neighborhood (Community For Life And Autonomy)
People’s Party Gyeongsangnam-Do
Peoples Empowerment Foundation (PEF)
Prun Naeseo Community Association
Pyeongtongsa In Masan, Changwon And Jinhae
Refugee Rights Center NANCEN
Representative Of The Institute Of Life And Arts
Resident Association For Safe And Happy Yangsan
Residents’ Committee For Coal Power Plant In Sacheon, Namhae And Hadong
Rohingya Community Development Campaign (RCDC)
Rohingya Union for Women Education and Development (RUWED)
Sacheon Ecological Environment Research Society
Sacheon Women’s Association
Sahmakum Teang Tnaut – Cambodian Urban NGO (STT)
Sangnam Film Production Center
Seomjingang River And Jiri Mountain People
Seoul Disabled People’s Right Film Festival
Seoul National University MEARI Alumni Association
Shancheong Humanities Meeting Leadership Society
Social Cooperative Celandine
Social Cooperative Containing A Village
Social Cooperative Handle Sandeul
Socialist Revolutionary Workers Party Ulsan
South North Korea Railway
Taiwan Alliance for Thai Democracy (台灣推動泰國民主聯盟)
Thai Action Committe for Democracy in Burma (TACDB)
Thai Democrats Without Borders Association
The Alliance of Independent Journalists (AJI)
The Anglican Church of Ulsan
The Federation Of Korean Artists In South Gyeongsang Province Geoje Branch
The Jeonnam National Church Man’s
The Power of Incheon Citizens
The Research Insititute of the Differently Abled People In Incheon
The Society For The Making Of A Real Village To Live In.
TMDU Myanmar Students Association
Tongyeong Citizens’ Culture Group ‘Tongro(Aisles)’
Tongyeong City Committee Of The Korean Confederation Of Trade Union
Tongyeong Geoje Environmental Movement Union
Tongyeong Sustainable Development Council
TongYeong Young Women’s Christian Association
Ulsan Bukgu Contingent Workers Center
Ulsan Civil Organizations that support Myanmar’s democracy (66 organizations)
Ulsan Green Party
Ulsan Labor Education Community
Ulsan Labor Humanrights Center
ULSAN MIGRANT CENTER
Ulsan Parents EduCoop
Ulsan People`s Solidarity
Ulsan worker group for Workplace struggle and Class solidarity
Vegetarian Peace Solidarity
Wewood Small Library
Won Buddhist Civil Society Network
Woongsang Labor Counseling Center Woongsang Story
Worker’s Solidarity from Below in Jeonbuk
Yangsan Foreign Workers Support Center
Yangsan Icoup Life Cooperative
Yangsan Parent Movement
Yangsan Women’s Association
Yoon Sang-Won Memorial Association
Young Deung Po Urban Industrial Mission
Young Kang Church
 Data from the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) as of 18 April 2021
 အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံမှ တစ်သီးပုဂ္ဂလနှင့် အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း၏ အမည်များကို ၎င်းတို့၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် လုံခြုံရေးကြောင့် ဖော်ပြမထားပါ။
အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို PDF ဖိုင်ဖြင့်ယူရန် မြန်မာဘာသာ I အင်္ဂလိပ်ဘာသာ